वस्तु र सेवाको बजारीकरण गर्ने सही प्लेटफर्म नै इन्फोटेक बनेको छ : चाैरासिया - Living with ICT
Home / Featured / वस्तु र सेवाको बजारीकरण गर्ने सही प्लेटफर्म नै इन्फोटेक बनेको छ : चाैरासिया
वस्तु र सेवाको बजारीकरण गर्ने सही प्लेटफर्म नै इन्फोटेक बनेको छ : चाैरासिया
Shiva Basnet Jan 29, 2017	Leaveacomment
प्रथम उपाध्यक्ष, क्यान महासंघ
क्यान महासंघले २३ वर्षदेखि सञ्चालन गर्दै आएको इन्फोटेक मेलाले सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रवद्र्धनमा कस्तो भूमिका खेलेको छ ?
इन्फोटेक मेलाको २३औं संस्करण हामीले काठमाडौंमा गर्दै छौं । यहाँसम्म आउँदा नेपाललाई सूचना प्रविधिको आधुनिकीकरणको मार्गमा डो¥याउन प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपमा यस्तो मेलाले सहयोग गरेको सर्वविदितै छ । साथै पछिल्लो दिन गाउँगाउँमा आइसिटीको अवेयरनेस क्रिएट गर्नुपर्छ भन्ने नारका साथ करिब ५७ जिल्लामा हामीले शाखा पनि खोलेका छौं । ती शाखामार्फत पनि केन्द्रीय स्तरकै क्यान इन्फोटेक मेला गरिरहेका छौं ।
तर, मोफसलका मेलामा अवलोकनकर्ताको न्यून आकर्षण पाइन्छ, कमजोरी कहाँ देख्नुहुन्छ ?
यसलाई कमजोरी कहाँ छ भनेर हेर्नुभन्दा पनि नेपालमा सूचना प्रविधिको अवस्था मोफसलमा कस्तो छ भनेर मूल्यांकन गर्न जरुरी देख्छु । हामीले राजधानीमै प्रदर्शनीमा राख्ने कम्पनी र तिनका प्रडक्ट र सर्भिस मोफसलका मेलामा पनि राख्छौं । तर, यहाँ प्रविधिको जस्तो प्रविधिको माग र प्रयोगदर त्यहाँ कम भएको हो वा कतिपय अवस्थामा आइसिटी अवेयरनेसकै कारण सोचेअनुकूलको मेला गर्न नसकिएको हो । वास्तवमा हामीले यो काम सुरु गरिसकेका छौं । यसको परिणाम आउने दिनमा देख्न सक्नुहुन्छ ।
राजधानीमा जारी इन्फोटेक कुन अर्थमा विशेष र भव्य छ ?
मानिसका लागि अनिवार्य बनिसकेको इन्टरनेट र त्योसँग नजिक भएको मोबाइल प्रविधिमा विशेष आकर्षण देखेको छु । पछिल्ला दिनमा विभिन्न सेक्युरिटी डिभाइस, कम्प्युटर एसेसोरिसहित आधुनिक प्रविधिसँग अपडेटेड डिभाइसहरु यो इन्फोटेकमा प्रदर्शनी गराएका छौं । व्यापारी वा सेवाप्रदायकले आफ्ना ग्राहक वा सेवाग्राहीसँग आफ्ना वस्तु र सेवाको बजारीकरण गर्ने सही प्लेटफर्म नै इन्फोटेक बनेको छ । यसर्थ फेरि प्रविधिको महामेलाका रुपमा सबैले ग्रहण गर्न सक्ने इन्फोटेक सञ्चालन गर्न सकेका छौं ।
Previous प्रविधिले झुम्याे राजधानी, यस्ता छन् इन्फाेटेकका अाकर्षण (विशेष रिपाेर्ट/फाेटाे फिचर)
Next सोल्टीमा क्यान आइसिटी कन्फेरेन्स हुँदै, सञ्चारमन्त्रीबाट उद्घाटन